Samsung grand2အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
ရောင်းချသူ: Moe Zat
Samsung grand2ရောင်းမည် .
Price. 28000 ks
Error ကတော့ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲပါတယ်.
ကျန် error မရှိ .
အမည်: Samsung grand 2